Bandhig Aqooneed loogu dabaal degayey Sanad guurrada 10aad ee Jaamacadda Plasma oo Muqdisho Lagu Qabtay – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Ku Dhawaad 60 Gaari Oo Ku Xaniban Inta Udhaxeysa Gobolada Mudug iyo Galgaduud
Kenya Oo Ka Deyrinaysa Amniga Magaalaada mandheera Ee Gobolka Waqooyi Bari
Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeele Oo Kulamo Siyaasadeed Ka Wada Muqdisho
Madaxweynaha Koofur Galbeed Oo Ku Wajahan Deegano Dhibaato Dhanka Nolosha ah Ka Jirto
Xildhibaanno, mas’uuliyiin, abwaanno, aqoon yahanno iyo marti sharaf kale ayaa ka qeybgalay munaasabad lagu soo gebagebeynayey bandhig aqooneed loogu dabaa degayey sanad guurrada 10aad ee kasoo wareegatay markii la aas aasay Jaamacadda Palasma oo lagu qabtay xarunta jaamacadda.
Munaasabada daah furka Jaamacadda oo ka dhacday Hoolka Jaamacadda ayaa waxaa ka hadlay Guddoomiyaha Jaamacadda Plasma Dr. Xasan Maxamed Xasan (Xasan Kaafi) oo sheegay in 10-kii sano ee Jaamacadda ay wax badan u qabsoomeen, ayna Jaamacadda ka aflaxeen kumanaan arday oo bartay qeybaha kala duwan ee Kulyadaha Jaamacada.
Waxaa la soo bandhigay agabyada kala duwan waxbarashada ee Jaamacadda, sidoo kale waxaa Bandhiga qeyb ka ahaa Kuliyadda Ganacsiga oo lagu biiriyay Kulyad cusub, Kulyadda Mareynta Qoyska oo soo bandhigtay habka cunto karinta iyo Farshaxanka.
Sidoo kale waxaa lagu soo bandhigtay noocyada kala duwan ee raashinka oo qaab aad soo jiidasho leh loo soo diyaariyay iyo dalagyada kala duwan ee kheyraadka dalkeena.
Xildhibaannada kala ah C/sataar Sheekh C/salaan Sheekh Xasan Barsane iyo Maxamuud Maxamed Goodir oo khudbado ka jeediyey munaasabadda ayaa aad ugu ammaanay maamulka jaamacadda Plasma sida ay aqoonta umadda Soomaaliyeed gacan ugu geysteen waxaana ay bogaadiyeen iney sii wadaan dadaalkooda hagar la’aaneed.
Madaxa Waxbarashada Jaamacadda Plasma Prof Cusmaan Sheekh Xaydar oo soo xeray bandhiggan ayaa ka hadlay muhiimadda bandhig aqooneedka waxaana uu sidoo kale ka hadlay waxyaabihii kala duwanaa ee ay bulshada u qabatay Jaamacadda Plasma mudada 10ka sano ee ay jirto.
Marti sharaftii ka qeyb gashay Bandhigan ayaa aad ula dhacay waxyaabihii la soo bandhigay, isla markaana bogaadiyay ardayda bandhigoodii qurxanaa ee ay ku soo beegeen sanad-guurada 10aad ee Jaamacadda Plasma.